EyeThupha 2, 2018 admin
CoinJar Australia buzisa fund cryptocurrency for kubatyali zimali ngokuphangaleleyo
CoinJar, kunomfana Bitcoin Australian, namhlanje basungule CoinJar Digital Currency Fund, i index-style cryptocurrency fund for kubatyali zimali ngokuphangaleleyo. I Fund iye iiklasi ezimbini; Bitcoin Class, ebonelela exposure ukuba Bitcoin kuphela; kunye noMgangatho Mixed, esinjongo ukulandelela ukusebenza BTC, LTC, nezinye cryptocurrencies, ziyalinganiselwa yi supply esisigxina.
Iqela CoinJar ikholelwa ukuba zombini iiklasi Fund ukunikela abatyali-zimali ngokuphangaleleyo ngendlela elula ukutyala iidola Australian, kuyo enokunika sokunabela empahla zemveli. imali yokuphatha 1.3% ngamnye ngonyaka Bitcoin Class kunye 1.8% ngamnye ngonyaka ukuze Class Oluyingxubevange kunye neendleko eqhelekileyo yokusebenza. izicelo kuphela kubaxumi ngokuphangaleleyo kufuneka bamkelwe-mali. CoinJar uthatha kulawulo kunye nokhuseleko lwe-asethi digital egameni abatyali kunye crypto engundoqo ukhuselekile kwi KDE multi-utyikityo.
Square ezuzwe $ 37M ukusuka Bitcoin norhwebo q2
Square umbiko Iholo kule veki, ukuveza ukuba inkampani efunyenweyo $37 million evela Bitcoin trading osemqoka yayo yayo peer-to-peer transfer imali app, Cash Square. Yaba ngekota ngokwenene Square kunye EPS zilungiswe uqikelelo ngokukhanda ($0.13 vs. $0.11) kunye izimali phezulu phantse 5% evela balindele ($385 million vs. $368 million). Total net inzuzo $815 million kwikota yesibini ka 2018, phezulu 48% unyaka phezu konyaka.
Nangona kwingeniso Bitcoin Square kaThixo phezulu ikota ngaphezu kwekota, Square elibanjiswe ~ $ 1 million ukusuka inkalo yorhwebo entsha, njengoko iindleko imisebenzi Bitcoin waba ~ $ 36M for q2. Oku kuye kwaba critique likhulu inkampani, imida yangoku imisebenzi yayo cryptocurrency azikho lukhulu. kunjalo, banikwa kokulawula landscape yangoku, Kusenokwenzeka ukuba ezi ndleko ezinxulumene kutyalo-mali karhulumente kunye nemizamo mvume federal. Kuyaphawuleka, ixabiso share of Square ibe phezu iinyembezi ngokupheleleyo kunyaka ophelileyo, lwakha 200% ngenxa becala imivuzo ibetha ziyafana yaye bullishness phezu ekujoliswe entsha nkampani kwi cryptocurrency.
Ungathengi kaThixo Medici inks deal with Zambian Gov kwi blockchain pilot registry komhlaba
Ungathengi amalungelo empahla sokuncedisa blockchain-kuxhaswe, Medici Land Governance, kubikwa ibambisene norhulumente waseZambia yokwakha blockchain-based isihloko komhlaba lobhaliso. Phantsi kwesivumelwano, MLG uza kubonelela Zambia a “inkqubo yolawulo komhlaba eqokelela kwaye ufumana ulwazi nobunini usebenzisa blockchain.” MLG ivumile ukuba ahlangule izatifikethi setayitile ngefomu yedijithali kwaye iprintwe urhulumente wesizwe ngoNovemba 30, 2018 ukuba bakhonze njengobungqina ingqiqo ukuze inkqubo owenziwe.
Overstock.com ngumseki kunye CEO Patrick Byrne uthe le projekthi iza kunceda i-lizwe nyathelo lisingise kuqoqosho lwehlabathi eyakha ithemba ngobugcisa. Ngamazwi ezinxulumene, Byrne iye esebenza yezoqoqosho Peruvian Hernando de Soto kwi sentlanganisela blockchain amalungelo empahla efunisela ekuthiwa De Soto Inc. Ishishini linenjongo yokunika iinkonzo kubantu malunga billion ezintlanu ngokuwanika ufikelelo kwiimarike zenkunzi womhlaba.
urhulumente Australian azalisa diski crypto ukukhuthaza ukhenketho
Urhulumente Australian uceba ukukhupha isibonelelo ukuya siqalo crypto njengenxalenye $8 million-mali ezintsha. I TravelbyBit Iintlawulo kwemali yedijithali neqonga amashishini zokuhamba ukhenketho lelinye 70 iinkampani eziya kufumana “Phambili Queensland phemba Ideas” mali, leyo exhasa oosomashishini eQueensland ukuba baphuhlise amashishini abo.
Injongo Le nkampani iya kuba kunyuswe inani abakhenkethi Central eQueensland ngokuthengisa unikeza zokuhamba kunye cryptocurrencies kunye nokudala imisebenzi. Innovation UMphathiswa Kate Jones uthe: "TravelbyBit liye laqulunqa yindlela enobuchule ukuze kube lula ukuba iindwendwe ukuba urhulumente wethu ukuhlawula izinto ezithengwa babo liyanda inani lamashishini asekuhlaleni ukwamukela cryptocurrency… Ndiyayiqonda TravelbyBit nto kujoliswe ngokukodwa iindawo ezifana waseBundaberg (ecaleni Great Barrier Reef) - ukusebenzisa cryptocurrency ukuze kube lula ukuba abakhenkethi babhukishe iiholide ".
exchange crypto aseBrazil iphumelele esimelene ibhange yavalwa akhawunti yayo
AseBrazil exchange cryptocurrency Walltime sisandula iphumelele idabi enkundleni ngokuchasene kwibhanki yasekuhlaleni nakuwubona Caixa Econômica Federal, asinyanzele ukuze unfreeze akhawunti ebamb ngaphezu $200,000 ezixabisa imali. Walltime iphumelele a odalwa lokuqala, intsingiselo isigqibo senkundla asikabikho lokugcina kodwa kunjalo ikuvumela exchange usebenzise imali kwi akhawunti yayo ukuze siqhubeke sikhonza abaxhasi okwakalokunje.
Walltime akazange akwazi ukusebenza iidipozithi yabathengi kuba imali yabo emkhenkceni & kuthiwa ubunzima umonakalo ngeli thuba. igqwetha Walltime wathi ilahleko ngaphezulu $ 250K into exabileyo Ingxelo Caixa Econômica & a "mhlawumbi elizayo indemnity intshukumo" kuphela aya kuyibona ukuzuza ngazo. ityala Walltime nxamnye Caixa Econômica safakwa emva ekuqaleni Epreli walo nyaka, njengoko ifuna yayo "-akhawunti yebhanki ivalekile ngaphandle nasiphi na isaziso okanye yokugwetyelwa" on March 22. Ngokutsho igqwetha ezimbini Wall Time kaThixo, uhamba ibhanki siye nxamnye izikhokelo ebekwe yi engundoqo yebhanki eBrazil.
SBI lityale $ 9m kwibakala leziko cryptocurrency yezabelo platform
Iinkonzo Japanese zemali ezinkulu SBI Holdings usise $9 million ngo US yedijithali yemarike umyili Cima Markets ukuxhasa ukudaleka iqonga cryptocurrency yezabelo zorhwebo eyakhelwe bezimali yeziko. SBI Crypto Investment ufumene 12% kota ku Cima Markets, leyo izinze e Charlotte, NC kwaye iiofisi zamasebe NYC, London, no Tokyo. SBI imali kuthiwa 1 billion yen ($9 million) kuba abambalwa yayo ubunini isikhundla kwinkampani.
Xa mali Cima Markets, SBI ijolise ekwakheni yezabelo exchange evumela abatyali-mali bamaziko ukuba kuthengiswa iimveliso ebotshelelwe kwiintshukumo amanani ka Bitcoin kunye nezinye cryptoassets zotyalo. iimveliso ezifana, leyo enokubandakanya amakamva, ongakhetha, kunye segazi, ukuba amaziko ukuba kuyibiyela ezinye izikhundla ukuze kwimarike cryptocurrency i, ekunciphiseni ubungozi nanika ukuba ukutshixa iingeniso okanye bokuthomalalisa yokungena losses.The of nabagcini ezintsha zibe kwimarike & uphuhliso kumaqonga ezintsha kulindeleke ukuba anike amaziko kunye nezimo ngakumbi indlela bafumane utyhileko cryptoassets.
EyeThupha 20, 2018 e 8:02 PM
Isilimela 15, 2019